Imodyuli ye-Ev Charging, i-Ev Dc Module Module, i-Ev Charger Module - UUGreenPower
IP65 module yokushaja ephezulu
Imojuli yokushaja ephezulu evikela i-IP65 isebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuphakelwa kwamandla nobuchwepheshe bokusabalalisa ukushisa, futhi yakhelwe ngokukhethekile inqwaba yangaphandle yokushaja ngamandla kwezimoto zikagesi. Izinga lokuvikelwa kwemvelo lifinyelela ku-IP65, elingakwazi ukuzivumelanisa nezindawo ezahlukahlukene ezinzima njengothuli, inkungu kasawoti nokujiya.
I-UBC 75010 bidirectional V2G yokushaja inqwaba esetshenziswa kakhulu ekuphenduleni nasempikweni yamandla phakathi kwezimoto zabagibeli kagesi kanye negridi yamandla. Inani lalo lesicelo lisekuwaneliseni ukushaja nsuku zonke kwezimoto zabagibeli bakagesi, nokudlala ngempumelelo indima yebhethri yemoto kagesi yokugcina amandla, ibona ukushaja okuhlelekile kwegridi yamandla, ukuphathwa kohlangothi lokufunwa kwamandla, inani elihlanganisiwe legridi encane namandla we-Intanethi.
I-UR100040-SW EV yokushaja imodyuli eyenzelwe ngokukhethekile ishaja enkulu ye-EV DC. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi ine-factor ephezulu yamandla, ukusebenza kahle okuphezulu, ukuminyana kwamandla amakhulu, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
UR100030-SW EV ukushaja module eziklanyelwe EV DC super ishaja. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi ine-factor ephezulu yamandla, ukusebenza kahle okuphezulu, ukuminyana kwamandla amakhulu, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
Sikholelwa ukuthi indalo ukuphela kwesikhali esinamandla sokuthola umphumela omuhle womkhiqizo.
Futhi sizosebenzisa ukudala phakathi nawo wonke umkhiqizo wokuklama umsebenzi.
Usizo lwabenza imisenenzi R & D iqembu
Uzibophezele ekuphakeleni okuhle kakhulu kwezingxenye ezisemqoka zesiteshi esikhulu sokushaja.
Cishe iminyaka engama-20 yesipiliyoni sokuthuthuka
Ukuqoqwa kobuchwepheshe bamandla e-DC kule minyaka engamashumi amabili edlule kubeke isisekelo esiqinile sentuthuko yamanje.
Idizayini emisha yokuthuthuka
Siphikelela ekwakhiweni okusha futhi sizama ukuklama uchungechunge lwe-module yokushaja enkulu yeziteshi ezishaja kakhulu.
Isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme
Asigcini ngokuhlinzeka ngensizakalo yangaphambi kokuthengisa, kodwa futhi nekhwalithi ephezulu yensizakalo yangemva kokuthengisa.
● IP65 ukuvikela okuphezulu ...
● Ukudluliswa kwamabhidi ...
Ukusebenza kahle kwe-Ultra okuphezulu: i ...
● Ukusebenza kahle kwe-Ultra: t ...
Into UMEV04 DC Ku ...
Gxila ekusebenzeni kwamandla kagesi ngogesi, xazulula iphuzu le-bottleneck.
I-Shenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd, esungulwe ngo-2015, izibophezele ekubeni ngumhlinzeki ongcono kakhulu wezinto ezisemqoka zeziteshi ezishaja kakhulu. Le nkampani inethimba le-R & D elisebenza ngogesi, cishe iminyaka engama-20 yokuqongelelwa kobuchwepheshe bamandla e-DC, ngokusebenzisa ukwakheka okusha, ukudala uchungechunge lwama-module angama-40kW, 30KW, 20KW, 15KW weziteshi ezishaja kakhulu.
I-Shenzhen UUGreenPower inamathela kumbono ogxile kumakhasimende, wobungcweti, igxila emandleni we-electronics technology innovation, ekuxazululeni iphuzu lamakhasimende, elikhula namakhasimende, futhi ngokuhlanganyela kukhuthazwa amandla aluhlaza kanye nomnotho wekhabhoni ephansi embonini yezimoto zikagesi.
I-UUGreenPower Ikhipha Izixazululo Ezine Zokushaja
I-UUGreenPower Ikhipha Izixazululo Ezine Zokushaja! Ithiphu eyi-Core: ngo-Agasti 26, umbukiso wemboni wezindawo zokushaja wase-Shanghai owawuse-Shanghai New International Expo Center wabanjwa. Kulo mbukiso, amabhizinisi amaningi ezinkanyezi zasekhaya nakwamanye amazwe ...
Ukushaja I-Alliance: Izinqwaba ezintsha zokushaja umphakathi zengezwe ngoMeyi, zenyuka ngama-59.5% unyaka nonyaka
Julayi / 20/2020
NgoJuni 11, imininingwane ekhishwe yiChina Charging Union ikhombise ngokusemthethweni ukuthi kusukela ngoMeyi 2018, amayunithi angamalungu kulo mfelandawonye abika inani eliphelele lama-piles angu-266 231 okushaja umphakathi, kwathi ngamalungu alo mfelandawonye, ​​izinqwaba zezimoto zathathwa amasampula ngama-441,422 izingcezu zedatha yolwazi. A t ...
NDANEV: Ukuhlaziywa kwedatha yokufinyelela eqoqelwayo yezimoto ezintsha zamandla ezweni lonke
NgoJuni 30, 2018, iwebhusayithi esemthethweni yeNational Big Data Alliance (NDANEV) yeZimoto Ezintsha Zamandla yakhipha izibalo kanye nokuhlaziywa kolwazi kumthamo wokufinyelela wemithombo emisha ngoMeyi. Ngokuya ngemininingwane yokwazisa, leli phepha lihlaziya ngokuhlelekile izinga lokufinyelela eliqoqekayo ...
Isiteshi sokushaja amaselula iVolkswagen sizoqala ukubonakala eJalimane ngoMashi ozayo
Uphiko lweVolkswagen Group selusungule futhi lwakhipha isiteshi sokushaja esingumahamba nendlwana sezimoto ezisebenza ngogesi, izikuta kagesi namabhayisikili kagesi, okuthiwa yisiteshi sokushaja eselula iVolkswagenpassat. Ukugubha iminyaka engu-80 yasungulwa, kwaVolkswagen bazofaka iziteshi eziyi-12 zokushaja amaselula eWo ...
INanjing ilungisa inkokhelo ejwayelekile yokushaja nokushaja, izimoto zikagesi ezimsulwa ezifika ku-1.68 yuan nge-kWh ngayinye
NgoJulayi 9, iNanjing Municipal Price Bureau yakhipha "Isaziso Sokulungisa Amazinga Okushaja Wokushaja Nokushintshwa Kwezimoto Zikagesi Ezimsulwa". Isaziso sikubeke ngokusobala ukuthi ibhasi likagesi elimsulwa elilungisiwe (12m) liyashaja futhi lingena esikhundleni sezinga eliphakeme kakhulu lokushaja ...